Muxuu u sheegay Kheyre dhallinyaradii Gaalkacyo ee uu la kulmay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muxuu u sheegay Kheyre dhallinyaradii Gaalkacyo ee uu la kulmay?
Muxuu u sheegay Kheyre dhallinyaradii Gaalkacyo ee uu la kulmay?
Gaalkacyo (HalQaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre oo Isniintii shalay gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah dhallinyarada ku nool magaaladaas.
Kulanka ayaa looga hadlay kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin dib-u-heshiisiinta, dib-u-dhiska GalMudug iyo guud ahaan dalka, mideynta awoodda dhallinyarada iyo u diyaarinta dhallinyarada hoggaaminta dalka.
Mr. Khayre ayaa u sheegay dhallinyarada in magaalo iyo deegaan kasta oo uu tago uu kulanka ugu horreeya la yeelanayay dhallinyada, isaga oo sababtana ku sheegay in dhallinyaradu yihiin hoggaanka mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, lagama maarmaanna ay tahay in ay sii ogaadaan fursadaha iyo caqabadaha, fikirkoodana ay ku biiriyaan hannaanka lagu horumarinayo dalka.
Dhallinyarada Gaalkacyo ayuu ra’iisul Wasaaruhu ku boorriyay in ay is abaabulaan, muujiyaana cududdooda, waxa uuna kula dardaarmay in is abaabulka ay ka billaabaan Gaalkacyo kaddibna ay ku xirmaan dhallinyarada deegaannada ku xeeran si ugu dambeyn loo helo cod dhallinyaro Soomaaliyeed oo midaysan, kana madax bannaan kooxeysi iyo qabiileysi, looguna wada istaago danta guud.
Kulanka ayaa qayb ka ahaa kulamo xariir ah oo ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu deegaannada Galmudug kula yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada si ay taladooda ugu daraan qorshaha dhismaha Galmudug dhammaystiran, loo dhanyahay, kana shaqeysa danaha reer Galmudug.
Xafiiska Halqaran.com, Garowe